Iraq: Xaruntii Sanaadiikhda Doorashada oo la gubay! |
Iraq: Xaruntii Sanaadiikhda Doorashada oo la gubay!
Ciraaq (estvlive) 11/06/2018
Dab xoogleh ayaa Axadii qabsaday Xarunta lagu kaydiyey Sanaadiikhda cododka Doorashadii bishii hore ka dhacday dalkaasi, todobaad kadib markii Baarlamaanka uu amaray in dib loogu noqdo tirinta cododka iyo natiijada.
Xaruntan ku taalay degmada al-Rusafa ee caasimada Baqdaad ayaa waxaa gebi ahaan ku bas-beelay sanaadiikh badan oo ay ku jireen waraaqaha codbixinta ee la doonayey in dib loo tiriyo.
Raysalwasaaraha Ciraaq Haydar Al Cabadi ayaa shalay war uu soo saaray ku sheegay in falkan uu yahay mid ka dhan ah Dimuquraadiyada dalkaasi, isagoona sheegay in xukuumadiisa gacan adag ku qaban doonto dadka uu ku sheegay inay horseedayaan amni xumada.
Xisbiga Raysalwasaaraha ayaa isagu galay kaalinta 3aad codbixintii dhacday 12kii bishii hore ee May. Waxaana doorashadaasi Baarlamaanka ku guuleystay Isbaheysiga uu hogaamiyo wadaadka shiicada ah ee Muqatada Al Sadr.
Kadib markii ay soo baxeen dacwado badan oo ka yimid xisbiyada dalkaasi ayuu Baarlamaanka Ciraaq asbuucii hore ansixiyey in dib loogu noqdo tirinta cododka taasi oo dib u dhac ku keenaysa dhismaha dowlada cusub, waxaa sidoo kale xilkii laga qaaday Guddigii doorashada.
Falkan lagu gubay xarunta Sanaadiikhda lagu kaydiyey ayaa ah mid lagu carqaladeenayo dib u tirinta cododka oo la tuhunsan yahay in la musuq maasuqay.